HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 Ankara
Dhamaan wararka iyo khariidadaha la xiriira Ankara, tareenada Ankara iyo Ankara, iyo sidoo kale wadada tareenada ee wadooyinka tareenada iyo telefishinka
Malaayiin dad ah ayaa baaraya safarka tareenka xawaaraha sare ku socda (YHT) khidmadaha bilkasta ee matoorada raadinta. Intee in le'eg kor loogu qaadayaa khidmadaha bilkasta ee loo yaqaan 'YHT'? Waa maxay khidmadaha Xawaaraha Sare (YHT) bishii oo ah khidmadaha is-qorista [More ...]
Hasan Bektaş, Madaxweynaha Midowga Shaqaalaha Shaqaalaha Gaadiidka (BTS), ayaa sheegay in kororka tikidhada TCDD ee tikidhada aan horay loo arag taariikhda TCDD. Bektaş wuxuu diyaarsaday u wareejinta iibinta tikidhada tigidhada tareenka ee qaybta gaarka loo leeyahay. [More ...]
Munaasabad maalin warbixin ah ayaa lagu qabtay Xarunta Madaxtooyada Ankara TÜBİTAK taariikhdu markay ahayd 2 oo loogu talagalay wicitaanada 2 ee Shift2020Rail Joint Venture (S22.01.2020R JU). Anaga oo ku hadlaya magaca hay'addayada, TCDD Kuxigeenka Guud ee Shirkadda Bilal Nailçı, Madaxweynaha TÜBİTAK [More ...]
Ku xigeenka AK Party Sivas İsmet Yılmaz ayaa sheegay in qiimaha tareenka xawaaraha sare, oo u adeegi doona inta u dhexeysa Sivas-Ankara, waa 13 bilyan TL. Isagoo sheegay in masaafada u dhexeysa Ankara iyo Sivas ay hoos u dhici doonto 2 saacadood, ayuu Yılmaz yiri, “dhamaadka 2020 [More ...]
Marka la eego baaxadda mashruuca Ankara-Sivas YHT, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Turkiga Mehmet Cahit Turhan, Wasiir ku-xigeenka Adil Karaismailoğlu, Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun, Kuxigeenka Maareeyaha Guud Öner Özer iyo wafdiga la socda. [More ...]
TCDD ayaa la sheegay inay kor u qaadayaan tigidhada xawaaraha sare (YHT) tigidhada. Sida ku xusan sheegashada Utku Çakırözer ee CHP, khidmadaha diiwaangelinta YHT ee u dhexeeya Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya oo ay isticmaaleen ardayda iyo saraakiisha wax ka barata Ankara [More ...]
Saxaafadda qaar, waxaa la sheegay inay jirtay boqolkiiba 300 socod tigidhada tareenka xawaaraha sare leh. TCDD Taşımacılık AŞ ayaa yidhi, "Isbeddello ayaa lagu sameeyay khidmadaha kaadhka diiwaangelinta, oo aan kor loo qaadin." Waxaa laga soo qaatay Agaasimaha Guud ee TCDD Tasimacilik AS [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M. Cahit Turhan ayaa shaaca ka qaaday in mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare, kaas oo yareyn doona Ankara iyo Sivas illaa 2 saacadood, in la dhammeyn doono horaanta xagaaga. Gaadiidka loo tago Kırıkkale si loo booqdo iyo [More ...]
Maamulaha Guud ee TCDD Tasimacilik Kamuran Yazıcı iyo Rector University Rector. Dr. Erkan İbiş wuxuu saxeexay borotokool ku saabsan safarka tareenka ee ardayda ERASMUS ee Agaasimaha Guud ee TCDD 21kii Janaayo. Qofka ajnabiga ah ee la safri doona borotokoolka [More ...]
Diyaarinta wareejinta gaadiidka rakaabka ee waaxda gaarka loo leeyahay, TCDD waxay ku dhawaad ​​seddex boqol boqolkiiba kordhisay tigidhada isdiiwaangelinta ee khadka loo maro YHT. Tigidhada 30-ka maalmood ah oo ay ka doorbidaan shaqaalaha iyo ardayda safka Eskişehir-Ankara waa 480 lira. [More ...]
Ilaa maanta (3000), lacagta xayeysiinta ee Agaasinka Guud ee TCDD iyo shaqaalaha TCDD Taşımacılık A.Ş, waxaa loo fahmay inay yihiin 22.01.2020 TL taas oo ay ka dhasheen dadaallo xoog leh oo uu sameeyay Sarkaalka Guud ee Gaadiidka Sarkaalka-Sen. [More ...]